Sababta rajo loo qabo, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Axdiga Hore waa sheeko rajo beel. Wuxuu ku bilaabmaa muujinta in dadka loo abuuray aragtida Ilaah. Laakiin wakhti aan dheerayn ayay dadku dembaabeen oo jannada laga eryay. Laakiin markii xukunka xukunka yimid eray ballan qaad ah - Ilaah wuxuu Shayddaan ku yidhi in mid ka mid ah farcanka Eva uu madaxa burburin doono (Bilowgii 1:3,15). Xornimo ayaa imaan doonta.
Eva waxay u badan tahay inay rajeysey in cunuggeeda koowaad uu noqdo xalka. Laakiin waxay ahayd Qaabiil - isaguna dhibaatada ayuu qayb ka ahaa. Dembigu wuu sii socday wuuna sii xumaaday. Xilligii Nuux waxaa jiray xal qayb ah, laakiin xukunkii dembigu wuu sii socday. Banii-adamnimadu waxay sii waday dhibaatooyin, iyadoo rajeynaysa inay wax ka fiicnaadaan, laakiin waligood ma aysan guuleysan.
Ballanqaadyo waa weyn ayaa loo qabtay Ibraahim. Laakiin wuxuu dhintay ka hor intaanu helin ballanqaadyadii oo dhan. Wuxuu lahaa ilmo laakiin waddan ma uusan lahayn weligiisna uma uusan noqon duco quruumaha oo dhan. Laakiin ballankii wuu sii jiray. Isxaaqna waxaa la siiyey Isxaaq, dabadeedna waxaa loo siiyey Yacquub.
Yacquub iyo qoyskiisuba waxay u guureen Masar oo waxay noqdeen quruun weyn, laakiinse iyagu way addoonsadeen. Laakiin Ilaah baa runtiisii ​​ka nidray ballankiisii. Oo waxay Masar ka soo saartay Masar iyadoo leh calaamooyin yaab leh.
Laakiinse reer binu Israa'iil sidii loo ballanqaaday aad bay ugu dheceen. Mucjisooyinka ma aysan caawin. Sharcigu ma caawin. Waxay sii wadeen inay dembaabaan, shaki bay ku sii wadeen, oo waxay sii wadeen socodkooda cidlada 40 sano. Laakiin Ilaah wuu rumaystay ballamadiisii, oo wuxuu keenay waddankii ballanqaaday oo reer Kancaan, oo dhulkiina wuxuu ku siiyey shuqullo yaab badan.
Laakiin taasi ma xallin dhibaatadooda. Iyagu weli waa isla dadka dembilaha ah oo kitaabka Garsoorayaasha wuxuu inoo sheegayaa dembiyada ugu xun qaarkood. Ilaah wuxuu ugu dambeyntii qabiilooyinkii woqooyi ka qabtay maxaabiistii Ashuur. Mid ka mid ah ayaa u maleyn lahaa in tani ay toobad keeni laheyd Yuhuudda, laakiin taasi ma aheyn kiiska. Dadkii ayaa mar kale ku guul darraystay oo haddana oggolaaday in la qabto.
Aaway ballantu hadda? Dadkii waxay dib ugu noqdeen meeshii uu Ibraahim ka bilaabay. Aaway ballantu? Ballanqaadka wuxuu ku jiray Eebbe oo aan been sheegi karin. Wuu fulin doonaa balanqaadkiisa, si kasta oo ay dadku u xumaadeen.
Ilaah wuxuu ku bilaabay sida ugu yar ee suurogalka ah - sidii embriyo oo bikrad ah. Bal eeg, waxaan ku siin doonaa calaamad, siduu hore ugu sii sheegay Ishacyaah. Gabadh bikrad ah baa uuraysan doonta oo umuli doonta ilmo waxaana loo bixin doonaa magaca Immanuel, taasoo macnaheedu yahay "Ilaah nala jiro". Laakiin isagu markii hore wuxuu noqday Ciise (Yesus) oo macnaheedu yahay "Ilaah waa ina badbaadin doonaa".
Ilaah wuxuu bilaabay inuu oofiyo ballankiisii ​​isagoo ah ilmo ku dhashay guurka. Tani waxay la xiriirtay dhaleeceyn bulsheed - xitaa 30 sano ka dib, hoggaamiyeyaasha Yuhuuddu waxay faallo ka jeediyeen asalka Ciise (Yooxanaa 8,41). Ayaa rumeyn doona sheekada Maryan ee ku saabsan malaa'igaha iyo rimidda aabihiis?
Ilaah wuxuu bilaabay inuu ku qanciyo rajadiisa dadkiisa qaab ayan aqoonin. Qofna ma qiyaasi karayn in ilmahan "sharci-darrada ah" uu jawaab u noqon doono rajada ummada. Ilmuhu waxba ma qaban karo, ma jiro qof wax bari kara, cid wax caawin kartaana ma jirto, cid wax badbaadin kartaa ma jirto. Laakiin cunugga ayaa leh awood.
Malaa'igta iyo adhijirraduba waxay sheegeen in badbaadiye ku dhashay Beytlaxam (Luukos 2,11). Wuxuu ahaa badbaadiye, badbaadiye, laakiin qofna ma badbaadin waqtigaas. Xitaa wuxuu ku qasbanaaday inuu naftiisa badbaadiyo. Qoysku waxay ku qasbanaadeen inay cararaan si ilmaha looga badbaadiyo Herodos oo ahaa boqorka Yuhuudda.
Laakiin Ilaah wuxuu u yeedhay ilmahan tabarta daran badbaadiyaha. Wuxuu ogaa waxa cunugani sameyn doono. Rajadii reer binu Israa'iil oo dhami way ku jiifaan cunuggan. Oo kan aan iftiinka u ahayn quruumaha, Bal eeg, quruumaha oo dhammuna waxay ahaayeen barakadii. kanu waa ina Daa'uud kaasoo xukumi lahaa dunida. Halkan waxaa ku dhashay ilmaha Xaawa oo baabi'in lahaa cadowga binu-aadmiga oo dhan. Laakiin wuxuu ahaa ilmo yar, kuna dhashay degganaan, noloshiisu waxay ku jirtay halis. Laakiin wax walba way is beddeleen dhalashadiisa.
Markii Ciise dhashey ma jirin qulqulka dadka aan Yuhuudda ahayn ee Yeruusaalem loo dhigayo. Ma jirin calaamad muujinaysa xoog siyaasadeed ama dhaqaale - ma jiro calaamad aan ahayn bikrad inay umushay iyo ilmo - calaamad u tahay inaanu qofna oo reer Yahuudah rumaynin.
Laakiin Ilaah baa innaga yimid, maxaa yeelay isagu waa aamin buu u ballanqaaday oo waa aasaaska rajadeenna oo dhan. Kama gaadhi karno ujeeddooyinka Eebbe dadaallada aadanaha. Eebbe ma sameeyo waxa aan ku fikirayno, laakiin wuxuu kuula muuqdaa si uu u ogaado shaqada. Waxaan ka fikirnaa shuruucda sida dalka iyo boqortooyooyinka dunidan. Ilaah wuxuu u maleeyaa qeybaha hoose, bilowga aan qoraallada aheyn, ruux ahaaneed halkii xoog jireed, guushu daciifnimada halkii awoodda.
Markuu Eebbe ina siiyay Ciise, wuu oofiyey ballanqaadyadiisi, wuuna dhammaystiray wax walba oo uu yidhi. Laakiin isla markiiba ma aragno fulinta. Dadka intiisa badan ma aysan rumeynin, iyo xitaa kuwa rumeeyey waxay rajeyn karaan oo keliya rajo.
Waan ognahay inuu ciise ku koray inuu naftiisa u bixiyo madax furasho dembigeenna, inuu cafiyo, u noqdo Iftiinka kuwa aan Yuhuudda ahayn, in shaydaanka laga adkaado oo uu naftiisa ku guuleysto dhimashadiisa iyo sarakicistiisa. Waxaan arki karnaa sida Ciise u yahay fulinta ballamihii Ilaah.
Waxaan arki karnaa wax ka badan wixii ay Yuhuuddu arki karaan 2000 sano ka hor, laakiin weli ma aragno waxkastoo jira. Weli ma aragno in ballanqaad kasta la fuliyay. Weli ma aragno in Shaydaanku xidhan yahay si uusan mar dambe u khiyaanayn dadka. Annagu weli ma aannu arag in dadkoo dhan ay Ilaah yaqaan. Wali ma aragno dhamaadka qaylada, ilmada, xanuunka, dhimashada iyo dhimashada. Waxaan weli rajeyneynaa jawaabta ugu dambeysa - laakiin Ciise waxaan ku leenahay rajo iyo hubaal.
Waxaynu leennahay ballanqaad uu Ilaah ballanqaaday Wiilkiisa, oo uu ku shaabadeeyey Ruuxa Quduuska ah. Waxaan aaminsanahay in waxkasta oo kale ay rumoobi doonaan, in Masiixu dhammayn doono shaqadii uu bilaabay. Waxaan ku kalsoonaan karnaa in ballanqaadyada oo dhami ay rumoobi doonaan - daruuri maahan sida aan fileynay inuu noqdo, laakiin sida uu Eebbe u qorsheeyay.
Wuxuu sameyn doonaa, sida loo ballanqaaday, oo loo maro Wiilkiisa, Ciise Masiix. Ma jecli inaan hadda aragno, laakiin Ilaah horaad u dhaqmay Ilaahna wuxuu xitaa ka shaqeynayaa gadaasha dhacdooyinka inay fuliyaan doonistiisa iyo qorshihiisa. Sidaan rajo u qabnay iyo ballanqaad badbaadada xagga Ciise markay ahayd ilmo ahaan, sidaas oo kale haatan markii Ciise sarakicnaa sarakicii waxaan ku leennahay rajo iyo ballanqaad dhammaystir. Waxaan sidoo kale u leenahay rajadaan koritaanka Boqortooyada Ilaah, shaqada kaniisadda iyo nolosheena shaqsiyeed.
Markay dadku rumaystaan, shaqadiisu waxay bilaabaysaa inay ku koraan iyaga. Ciise wuxuu yiri waa inaan dib u dhalannaa oo markaan rumeysannahay in Ruuxa Quduuska ahi uu na daboolayo oo uu nolol cusub inaga dhex abuuro. Sidii Ciise ballanqaaday, wuxuu noogu yimaadaa inuu na dhex joogo.
Qof baa mar yidhi: "Ciise wuu dhalan karaa 1000 Malachi, umana caawinayso haddii uusan ku dhalan aniga." Rajada uu Ciise dunida u keenayo faa iido nooguma laha haddii aan annaga u aqbalno inuu yahay rajadeenna. Waa inaan u oggolaannaa Ciise inuu nagu noolaado.
Waxaan jecel nahay inaan nafteena eegno oo aan ka fikirno: «Wax badan halkaas kuma arko. Aad ugama fiicna sidii aan ahaa 20 sano ka hor. Waxaan weli la halgamayaa dembiga, shaki iyo eed. Weli aniga waxaan ahay qof jaceyl iyo madax adag. Kuma fiicna inaan ahay qof rabaani ah oo reer binu Israa'iil hore ahaan jireen. Waxaan la yaabanahay haddii Eebbe runtii wax uun ku sameeyo noloshayda. Waxay umuuqataa inaan sameeyay wax horumar ah.
Jawaabtu waa in la xasuusto ciise. Bilowga cusub ee ruuxiga ah ma sameyn karo isbeddel wanaagsan waqtiga xaadirka ah - laakiin way dhacdaa, maxaa yeelay Ilaah ayaa sidaas leh. Waxa na dhex jooga waa uun lacag bixin. Waa bilow oo waa dammaanad xagga Eebbe ka timid. Ruuxa Quduuska ahu wuxuu hoos u dhigay sharafta weli soo socota.
Ciise wuxuu inoo sheegayaa in malaa'igahu ay farxiyaan Malak kasta marka dambiilaha la beddelo. Waxay ka heesaan qofkasta oo rumaysta Masiixa maxaa yeelay ilmo baa dhashay. Cunugani waxaa laga yaabaa inuusan sameynin waxyaabo waaweyn. Waxaa jiri kara dagaalo, laakiin waa cunug Eebbe wuuna arki doonaa in shaqadiisa la qabtay. Isaga ayaa daryeeli doona. In kasta oo nolosheenna ruuxiga ahi aanu kaamil ahayn, haddana wuu sii wadaa inuu nala sii shaqeeyo ilaa shaqadiisa la dhammaystiro.
Sida ay rajo weyn ugu qabaan ciise inuu yahay cunug, rajo weyn ayaa ka jirta masiixiyiinta dhallaanka ah. Si kastoo ay ahaataba intaad Masiixi ahayd, rajo weyn baa kuu jirta adiga maxaa yeelay, Ilaah baa ku maal galiyay - oo kama tanaasuli doono shaqadii uu bilaabay.